Iran oo Lacago Badan Ku Soo Iibsanaysa Diyaarado
Dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday inay bixineyso qeyb ka mid ah lacagta ay ku dooneyso inay kusoo iibsato 80 diyaaradood oo nuuca Boeing ah iyadoo Iran ay ka iibsaneyso diyaaradahaan shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee diyaaradaha sameysa waxaana qiimaha lacageed ee diyaaradahaani ku kacayaan $16.6 billion.
Shirkadda diyaaradaha soo-saarta ee Boeing iyo dhiggeeda Airbus ee laga leeyahay Yurub ayaa labaduba la saxiixday qandaraas bishan dowladda Iran waxayna doonayaan inay ka iibiyaan diyaradahooda waana heshiiskii ugu horeeyey tan iyo markii cunnaqabateynta caalamiga ah laga qaaday dalka Iran cunnaqabateyntaas oo caalamku ku xakameynayey barnaamijka Nuclearka ee Iran.
Bedelaadda lagu sameynayo diyaaradaha duqoobay ee dalka Iran ayaa ah mid ka mid ah fursadaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee heshiiskii 2015kii lagu qaaday cunnaqabateynta uu keenay, heshiiskaas waxaa qeyb ka ahaa madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ee dalka Mareykanka Barrak Obama waxana jirta in madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykan Donald Trump uu doonayo inuu wax badan ka ogaado heshiiskan.
Iyadoo ay jirto baahida weyn ee Iran u qabto diyaarado cusub oo ay ku bedesho kuwii ay haysatay cunnaqabateynta ka hor ayey suuqa gashay waqti shirkadaha diyaaradaha sameeya ee Boeing , Airbus iyo shirkado yaryar ee diyaaradaha sameeya ayaa dhammaantood wajahaya hoos u dhac ku yimid dhinaca dalabaadka diyaaradaha waxaana la rajeynayaa inay qiime dhismis xooggan sameeyaan.
Shirkadda Boeing ayaa ku dhawaaqday bishan hoos u dhigeyso waxsoosaarkeeda dhinaca diyaaradaha ah sababo la xiriira hoos u dhac ku yimid diyaaradihii laga dalban jiray.
“Boeing ayaa ku dhawaaqday in heshiiska diyaaradeed oo ay Iran la gaartay uu ku kacayo qiime lacageed oo gaaraya $16.6 billion waxaana tixgelineynaa heshiiska ku aaddan iibsiga diyaaradaha sidaana waxaa yiri” wasiir ku xigeenka gaadiidka Asghar Fakhrieh-Kashan.
Heshiis shirkadda Airbus ay uga iibineyso Iran 100 diyaaradeed oo ay wada saxiixdeen ayaa ku kacaya $18-$20 billion laakiin madaxa diyaaradaha Iran ayaa laga soo xigtay isagoo leh in qiimaha heshiiska uusan dhaafsiisnaan doonin $10 billion.
Dowladda madaxweyne Hassan Rouhani oo ah nin go’aan qaadasho leh ayaa cadaadis ugu jira sidii loo soo gebagabeyn lahaa heshiisyada si loogu muujiyo caalamka in heshiiskii cunnaqabateynta looga qaaday Iran uu hirgalay, madaxweynaha Iran ayaa cambaareyn kala kulmaya dalkiisa isagoo lagu eedeynayo inuu qarash badan ku bixiyey diyaaradaha.